About Us - Gaomi Ruigu Labor Ukuvikelwa Co., Ltd
Shandong Gaomi Ruigu Ukuvikelwa zabasebenzi lisebenze ifektri kuyinto ibhizinisi owaziwa onguchwepheshe ekukhiqizeni nokudayiswa izicathulo Ukuvikelwa zabasebenzi kanye amagilavu, ifektri uye walandela njalo umqondo ukuphathwa izinga based nokuphepha emisha. Kuye asathuthuka futhi nikhula abanolaka emakethe ukuncintisana, futhi unqobile amazwana ezinhle nodumo abathengisi abaningi kanye namakhasimende.
kwemboni yethu ikakhulu ukukhiqiza Ukuvikelwa zabasebenzi Ruigu brand lisebenze. Imikhiqizo ziphelele, futhi imikhiqizo eziyinhloko ngentambo phezulu, umjovo, uchungechunge abandayo okunamathelayo, ingqikithi ezingaphezu kuka-60 izinhlobo, eliphezulu, Yizinga eliphakeme. Imikhiqizo embonini yethu, kuncike umkhakha futhi uhlobo lomsebenzi, zisebenzisa izindlela ezihlukahlukene izinqubo ukuhlangabezana nezidingo zonke izinhlobo izimo ezimbi ukusebenza.
Chen Jianhua, umphathi-jikelele, yemukela amakhasimende amasha namadala lokuphuza ukucutshungulwa kanye ngokwezifiso mass izitayela ezihlukahlukene, Sizimisele ukusebenza nge high quality imikhiqizo kanye aphakeme inkonzo izinga, uzimisele phokophela kuzo zonke izizinda zokuphila ukuze udale entsha bese izinga okusezingeni futhi indawo ephephile.